ဂီတပွဲတော် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ တွင် ကျင်းပဖွယ်ရှိ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > ဂီတပွဲတော် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ တွင် ကျင်းပဖွယ်ရှိ
ဂီတပွဲတော် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ တွင် ကျင်းပဖွယ်ရှိ	မင်းသက်၊ သဲသဲ	| သောကြာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၃၅ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို လာမည့်ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ - MCC ၌ ပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။MCC ခန်းမကို ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၌ ကျပ် ၁၅ သိန်းဖြင့် ငှားရမ်းထားကြောင်း စည်ပင် သတင်းရပ်ကွက်မှ အမည်မဖော်လိုသူ အရာထမ်းတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ယခုကဲ့သို့ သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်မှာ မှန်ကန်သော်လည်း တရားဝင် ပွဲမိန့် မရသေးသည့်အတွက် အတည်ပြု မပေးနိုင်သေးကြောင်း ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီထံမှ သိရသည်။ “အခု ပြောနေကြတာက လုပ်ရင် ဖြစ်နိုင်မယ့်ရက်ကို ပြောနေကြတာ။ တကယ်တော့ ရက်ကို မသတ်မှတ် ရသေး ဘူး။ အရင်တခါလည်း ၁၅ ရက်နေ့ လုပ်မယ် ဆိုပြီး ပျက်သွားတယ်။ အခုကတော့ ကျနော် မပြောချင်ဘူး။ ပွဲမိန့် ကျပြီးတော့မှ ပြောမှာ” ဟု ကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းထိန်က ဆိုသည်။အဆိုပါ ပွဲတော်ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ၊ ပညာရေးကွန်ယက် အဖွဲ့များနှင့် အနုပညာရှင်များက ပူးပေါင်း စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်း၌ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ပွဲမိန့်မရသည့်အတွက် ကျင်းပမည့်ရက်ကို ပြောင်းရွှေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးတွင် ကူညီရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂီတအနုပညာရှင်များ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်၌ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် စတင်စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းရန်ပုံငွေပွဲ၌ Emperor ၊ Metalzone ၊ Lazy Club ၊ Big Bag ၊ Plus3၊ Spectrum ၊ Reason ၊ Wanted ၊ Vertical Vibration ၊ The Tree အစရှိသည့် တီဝိုင်းများ နှင့်အတူ နာမည်ကျော် ဂီတ အနုပညာရှင် ၅ဝ ကျော်ကမေတ္တာဖြင့် ကူညီသီဆိုကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျိုးဖြူပိုက်လိုင်းအတွက် ရေတွန်းစက်များ တည်ဆောက်	ရန်ကုန်မြို့တွင်း အခမဲ့ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများ ဆောက်မည်	မထသ တွင် ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်အမတ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမည်	မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ ၈၈ ၏ ဂစ်တာ	သက်တမ်း ၄၀ ရှိ ဘောက်ထော်ဈေး အဆင်မြှင့်ရန်တင်ပြ	ပန်းပျိူးပင်ဆိုင် ဧရိယာကို အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်မည်	မူလသံယုတ် ကျောင်းတိုက် ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်	Who is Online
We have 155 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved